Ama-Slashers & Mowers abahlinzeki nefektri - China Slashers & Mowers Abakhiqizi
Imininingwane Yomkhiqizo Imishini yokugunda utshani ilungele izindawo ezinotshani eziyizicaba ezindaweni zezolimo / zokwalusa nezindawo ezinotshani ezinezintaba namagquma. Zisetshenziselwa ikakhulukazi ukusika utshani, ukuvuna ifolishi, ukuphathwa kwamadlelo, ukusikwa kwesihlahla, njll. Ungakhetha injini kadizili noma injini kaphethiloli njengamandla Amandla Ukucaciswa Kwezinto Zezinto Amandla Ukucaciswa Kwamandla Amandla kw. 4.8 Displacement CC 196 Ukusika ububanzi mm 60/80/90 / 100 / 120mm ozikhethela Stubble ukuphakama mm 20-80 ...
Imininingwane Yomkhiqizo I-slasher ejikelezayo ifanelekile ukuhlanzwa nokushaywa ehlathini nasotshani, Kanye nokwenza ngcono ipulazi elingalingani. Lo mshini ungokwesayensi ekwakhiweni, okuhlala isikhathi eside enkonzweni, okulula ukusebenza nokugcina, okuguquguqukayo ekusikeni ukuphakama futhi kunokusebenza okuhle kakhulu, yimishini yezolimo ekahle yokugawulwa kotshani nokuhlanzwa kwepulazi. Ukucaciswa Kobuchwepheshe Model Unit SL2-1.2 SL4-1.5 SL4-1.8 Ububanzi bokusebenza mm 1200 1500 ...
9gb Uchungechunge Mower
Umkhiqizo Imininingwane 9GB uchungechunge reciprocating mower isetshenziswa ekuvuneni utshani epulazini, ehlathini noma njengoba umhlaba ture.It usebenza egqumeni, insimu ethambekisayo noma insimu encane. Ilawula umshayeli kagandaganda futhi isebenza kahle, i-mower yonke ingaphakanyiswa yi-hydraulic pressure systerm lapho ugandaganda weqa umgoqo. I-Technical Specification Model Unit 9GB-1.2 9GB-1.4 9GB-1.6 9GB-1.8 9GB-2.1 Ububanzi bokusebenza mm 1200 1400 1600 1800 2100 ...